Crypti စျေး - အွန်လိုင်း XCR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Crypti (XCR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Crypti (XCR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Crypti ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
XCR – Crypti
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Crypti တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Crypti များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CryptiXCR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0454CryptiXCR သို့ ယူရိုEUR€0.0387CryptiXCR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0348CryptiXCR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0417CryptiXCR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.41CryptiXCR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.288CryptiXCR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.01CryptiXCR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.171CryptiXCR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0606CryptiXCR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0638CryptiXCR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.02CryptiXCR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.352CryptiXCR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.244CryptiXCR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.4CryptiXCR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.7.69CryptiXCR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0624CryptiXCR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0694CryptiXCR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.41CryptiXCR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.316CryptiXCR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4.85CryptiXCR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩53.88CryptiXCR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦17.63CryptiXCR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.33CryptiXCR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.26
CryptiXCR သို့ BitcoinBTC0.000004 CryptiXCR သို့ EthereumETH0.000122 CryptiXCR သို့ LitecoinLTC0.00085 CryptiXCR သို့ DigitalCashDASH0.000523 CryptiXCR သို့ MoneroXMR0.000529 CryptiXCR သို့ NxtNXT3.71 CryptiXCR သို့ Ethereum ClassicETC0.00683 CryptiXCR သို့ DogecoinDOGE13.39 CryptiXCR သို့ ZCashZEC0.000564 CryptiXCR သို့ BitsharesBTS1.78 CryptiXCR သို့ DigiByteDGB1.52 CryptiXCR သို့ RippleXRP0.164 CryptiXCR သို့ BitcoinDarkBTCD0.0016 CryptiXCR သို့ PeerCoinPPC0.153 CryptiXCR သို့ CraigsCoinCRAIG21.1 CryptiXCR သို့ BitstakeXBS1.98 CryptiXCR သို့ PayCoinXPY0.808 CryptiXCR သို့ ProsperCoinPRC5.81 CryptiXCR သို့ YbCoinYBC0.00002 CryptiXCR သို့ DarkKushDANK14.85 CryptiXCR သို့ GiveCoinGIVE100.24 CryptiXCR သို့ KoboCoinKOBO10.55 CryptiXCR သို့ DarkTokenDT0.0418 CryptiXCR သို့ CETUS CoinCETI133.65
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 06:50:02 +0000.